Xaaladda Cakiran ee Denmark
Denmark, Maxaa Dhacay?
Cabdulqani Qorane Muxammad
War la helaaba tala helee ayey soomaalidu tiraah. Xilliyada ay taagan yihiin arrimaha xasaasiga ah ee siyaabo kala gedisan saameynta ugu yeelan kara qof walba oo naga mid ah, sida xiisadda haatan ka taagan Denmark oo kale, waa lagama maarmaan in la is weydaarsado aragtiyaha jira ee ku keydsan maskaxda, si hab qoto dheer loogu falanqeeyo, dhinacyo badanna looga eego macluumaadka firirsan ee u baahan in khibrad iyo aqoonba laga kororsado.
Dhacdooyinka haatan jira oo aan aaminsanahay inay na wada tabanayaan, ayaa daraaseyntooda waxay sahleysaa in la fahmo waxna laga ogaado asbaabaha kallifay inay wax u dhacaan sidii aynu aragnay ama maqalnay, halka qaarkeen, nasiib darro iyo nasiib wanaag midey ahaataba ay goob joog ka ahaayeen halka muranku ka dhashay min bilowgii arrintan ilaa iyo waqitag xaaliga ah.
Akhristow waxaynu halkan ku qaadaa dhigi doonnaa faallo kooban oo ku saabsan xaaladda cakiran ee ka taagan Denmark oo uu weheliyo qubane ku saabsan dhacdooyinkii ugu dambeeyey, anigoo ka cudurdaaranaya dheerarka maqaalka.
Nin kuu digay kuma dilin kumana dagin
Kadib xilligii uu wargeyska JP baahiyey aflagaadooyinkii ay ku muujinayeen neceybka iyo cadaawadda ay u qabaan Islaamka, ayaa badi muslimiinta ku nool Denmark intii karaankooda ah ay si aanan kala har laheyn uga jawaab celiyeen xadgudubka wargeyska. Jawaabahaas ay muslimiintu bixiyeen ayaa badi waxay xambaarsanaayeen digniin tilmaameysa, aflagaaddo loo geysto nabi Muxammad s.c.w. inay tahay arrin aanan ciribtiisa la mahadin doonin, sidaa aawadeed waxay ugu naseexeeyeen wargeyskii aflagaadada geystay inuu cudurdaarasho bixiyo. Ra’iisul-wasaaraha dalka Anders Fogh Rasmussen ayey isagana ka dalbadeen in uu wax ka qabto foolxumada uu ku kacay wargeyska.
Waxaa la yaab ku noqotay intii maskax fiyow laheyde agagaarka ka dhoweyd, markii lagu arkay telefishinnada dalka iyo warbaahinta kaleba ra’iisulwasaarihii laga sugayey in uu ugu yaraan cambaareyn usoo jeediyo wargeyska oo difaacaya mowqifka wargeyska, isaga oo ku tilmaamay falkaas xun, arrin ka tarjumeysa dimuqraadiyad iyo xorriyadda hadalka ee uu qof walba oo deenish ah xaqa u leeyahay, halka uu jawaabaha muslimiintana ku tilmaamay inay yihiin handadaad iyo wax aan la aqbali karin.
Wargeyska ayaa isagana dhankiisa kasii laban laabay weerarkiisii cadaawadda xambarsanaa iyagoo daabacay qoraallo ay ku andacoonayaan inay muslimiinta ugu dhigayaan casharro ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka ( freedom of speech ). Intaa waxaa dheeraa in dawladdu ay isla xilliyadaas ku soo casuuntay Kobenheegan Ayaan Xirsi si uu ra’iisulwaasaruhu u guddoonsiiyo billad abaal marin ah oo la xiriirta dagaalka qaawan ee ay ku heyso Islaamka.
Waxay nagu faleen waxay naga damceen baa ka daran, ayaa nin laga sheegay!
Ayaan Xirsi ayaa dhowrkii habeen ee ay joogtay Denmark ku dhammeysatay inay bannaanka soo dhigto naceybkeeda iyo wixii xumaan ay qalbiga ugu heysay Islaamka. Af wax cunay xishoo baa la yiriye Ayaan ma aanay hambeysan kalmad xun oo afkeeda soo mari kartay. Waxay Qur’aanka ku sheegtay in uu xuquuqda dumarka duudsiyo sidaa aawadeedna ay wax badan kaga soo horjeeddo. Waxay in badan ku celclisay in ay dood adag ka qabto in lagu dhaqmo Qur’aanka. Waxayna si adag hoosta uga xarriiqday in la xiro madaarista khaaska ah ee muslimiinta uga furan dalalka Yurub dhexdooda, ilaa ay dhowr jeer wariyayaashii wareysanayay ay xasuusiyeen in muslimiinta Yurub ku nool laftoodu uu sharciga ka jira Yurub u ogolaanayo waxyaabaha qaarkood, arrimahaas oo kalena aanan la isaga dhaqaaqi karin iyadoon baarlamaanku sharci cusub kasoo saarin.
Ayaan oo aysan cid nool iyo cid dhimatay toona badbaado ka helin ayaa nabiga s.c.w. ku sheegtay wax uusan qof muslim ah iska daaye gaal xishoonaya macaa ku dhiirran karin.
Ayaan intaa kuma aysan gaabsan ee waxay ka dalbatay Denmark in ay u ogolaadaan in ay dalkooda ku dhex sameyso filim lagu aflagaadeynayo nabi Muxammad s.c.w. kaas oo uu daawan karo qof walba oo mustaqbalka u baahda in uu wax ka ogaado qaab nololeedkii nabiga s.c.w. isagoon qofku u baahan in uu aqristo kutubta siyarka ee ka hadla hab nololeedkii nabiga s.c.w. Dalabkaas ayay dhinacyadii uu khuseeyay gacmo furan ku soo dhoweeyeen.
Akhristow Ayaan hadalladeeda ma lahan nuxur iyo xikmad laga soo tabiyo toona, laakiin inaan wax ka xusno waxaan uga dan leenahay in aan wax ka ogaanno dadka muslimiinta ay la gorgortamayaan noocyadooda, asaaliibta ay adeegsadaan iyo sida aysan xurmo iyo tixgelin toona ugu heynin Islaamka iyo muslimiinta toona. Si kale haddaan u niraah cadawgaaga oo aad baratid waxay ugu yaraan sabab u noqon kartaa inaad ka sharkiisan ka gaashaamatid.
Maxaa kallifay waxaasoo naceyb ah?
Waxaa dad badani is weydiinayaan sababta kalliftay in ay Denmark ku tallaabsato gefka intaa la’eg ee aynu aragnay natiijadii kharaareyd ee ka dhalatay,isla markaana ku adkeysato.
Dhab ahaantii wey adag tahay in jawaab go’an laga bixiyo sababta kama dambeysta ah ee kaliftay dhacdooyinkan, hase ahaatee waxaa jira waxyaabo badan oo la dhihi karo dowr muuqda ayey ka ciyaareen in wargeys Deenish ah uu ku kaco xadgudubkaas, isla mar ahaantaana warbaahinta inteeda kale uu kula taxaddiyo ama ku yiraahdo car yaa yeeli kara sida aan yeelay, dabadeedna uu dowladda kaga helo garab.
Arrimahaas dowrka muuqda ka ciyaaray inay abuuranti xiisaddan ayaa dadka qaar ay ku sheegaan sidan:
Waa tii la yiri habar dhali weyday aleelo ku waalataye, sida qabqablayaasha Soomaaliya nasiinada iyo nabadda u diiday marka ay taag darro dareemaan ay ugu waashaan argagixisaa dalka joogta ee ha nala soo gaaro, si ay gaalada kaalmo uga helaan, si lamid ah ayaa Yurub dhexdeeda wax ka sheegista islaamka lagaga helaa sumcad iyo xoogaa kusii cimri dheereysi ah fagaarayaasha siyaasadda. Sidaa waxaa yeela qaaliban qofkii isaga baqa in uu tareenka ka dhici rabo iyo qofkii aanan heyn wax kale oo uu olole (campaign) siyaasadeed ka dhigto. Hadaba ashkhaasta iyo kooxaha shaqada ka dhigtay islaam cayga magac baa ka galay ee caqiido kama aha.
Dadka qaar ayaa waxay ku tilmaamaan in ay kalliftay xadgudubkan aqoon yarida ay deenishku u qabaan islaamka, dadkuna aalaa waxa aysan aqoonta u laheyn wey iska colleystaan.
Anigoonan wada tirineynin dhammaan arrimaha ay dadka wax indha indheeya u arkaan inay kallifeen xadgudubyadaas la isu garabsaday ayaan kaga gaabsaneynaa in aan ka tilmaanno mid kamid ah oo inta ka soo hartay ay soo hoos gelayaan.
Qaraxyadii maraykanka ka dhacay kadib ayey guud ahaan warbaahinta reer galbeedku qaadday olole ay ku suurad xumeyneyso islaamka, si marka islaamka lagu eego indhaha reer galbeedka ay usoo baxdo natiijo oraneysa Islaam = Argagixiso, sidaa aawadeed ha isugu dhowaan. Hase yeeshee isla markiiba waxaa dhalatay su’aal aysan warbahintu kasii gaashaaman in la is weydiin doono, taasoo ah ´´aragnay sida ay u arkaan Islaamka dadka kasoo horjeeda, ee islaamka isagu sidee ayuu gudaha uga eg yahay``.
Halkaa waxaa ka dhalatay in ay si dhakhso leh uga dhammaadaan maktabadaha, kutubta ka hadasha Islaamka ee ku tarjuman afafka qalaad, ilaa maktabaduhu ay ka waayeen wax ay ku daboolaan baahida macaamiishooda ay u qabaan buugaag ka hadleysa islaamka.
Arrintaasi waxaa kasoo baxday natiijo ah in galbeedka looga soo islaamay si aad u xolwi badan marka loo eego waayadii hore. Denmark oo kamid aheyd dalalkaas sida la yaabka leh looga soo islaamayo ayaa waxaa warbaahinta usoo baxday inaysan ololahoodii Islaam xumeyska ahaa aysan ka gaarin dantii ay uga gol-lahaayeen. Halkii ay dadka Islaamka ka nacsiin lahaayeenna ay ku abuureen su’aalo aysan dadku horay isu weydii jirin.
Laba usbuuc ka hor jimcadii 30.09.2005ta ee uu wargeyska Jyllands-Posten soo bandhigay sawirradii ay ku aflagaadeynayeen nabiga s.c.w. ayaa wargeyska maalinlaha ah ee lagu magacaabo Ekstra bladet mid ka mid ah cadadyadiisa uu ku soo saaray faallo tibaaxeysa in Dadka deenishka ah ee Islamnimada soo gelaya ay cel-celis ahaan u dhaxeeyaan 5-10 ruux usbuuciiba oo rag iyo dumarba leh.
Waxaa xusid mudan dadka waayadan dambe soo islaamaya marka si guud loo eego inay kaga duwan yihiin kuwii waayadii hore soo islaami jiray arrimahan.
1) Dadkii waayadii hore soo islaami jiray waxay u badnaayeen dumar badi ahaan islaamnimadooda ay u sabab aheyd xiriir guur oo ay la yeesheen rag muslimiin ah, markaa kadibna hadba yeesha qaab dhaqanka uu leeyahay qofkii ay sababtiisa islaamka kusoo galeen. Dadka maanta soo galaya Islaamkase waa dad badanaa soo islaamay kadib markay sameeyeen dabagal dheer, aqris iyo khadbado diini ah oo la jeedinayo oo ay xaadireen.
2) Dadkan waayahan dambe soo islaamaya waxaad ku arkeysaa intooda badan inay yihiin dad doonaya inay bartaan islaamka, dabadeedna si camaliyan ah u dhaqan geliyaan. Tusaale ahaan waxaad arkeysaa qof dumar ah oo ku labisan xijaabkii sharciga ahaa min tin ilaa cidhib asal ahaanna kasoo jeedda deenish iwm. Waxaad sidoo kale arkeysaa nin ay ka muuqato astaamihii sunnada oo dhammeystiran isla mar ahaantaana indho buluugan iyo timo cowl ah leh, shanta salaadood ama badidoodna aadan masjidka ka waayeynin.
Arrimahaaan noocaan oo kale ah markey soo shaac baxeen ayey horta jariidaddu ku dhaqaaqday isku deygii faashilka ahaa ee ay ku aflagaadeysay nabiga s.c.w. si ay u hakiso soo gelitaanka tirada badan ee Islaamka. Isku deygaas hakinta ah laftiisa ayaanan noqonin mid looga joogsaday soo gelitaankii islaamka, waayo dad badan oo daraasad ugu jiray islaamka ayey ku dhiirri gelisay inay islaamka soo galaan kadib markay arkeen cadaawadda iyo dhagarta la doonayo in islaamka lagu hor istaago.
Waxaan shakhsiyan xasuusanahay oo aan goob joog ka ahaa, maalmo yar ka gadaale markii wargeyska uu soo saaray sawirradii xumaa, dood adagina ay ka dhex taagan tahay gudaha Denmark in maalin maalmaha kamid ah xilli xoogaa ka horreeya salaadda casar uu masjid noogu soo galay nin yiri waxaan doonayaa in aan islaamo. In sidan foosha xun loo caayey nabiga s.c.w. ayaa igu dhalisay inaan islaamka soo galo ayuu yiri ninkaas oo isla galabkaasba wax ka tukaday salaaddii casar isagoo caddeeyey ku faraxsanaantiisa uu ku faraxsan yahay in uu maanta qaatay go’aankii ugu muhiimsanaa noloshiisa.
Markaad talo soo jeedisid oo lagaa qaadan waayo in la eedo ma jeclaataa??
Kadib markii xadgudubyadaa diineed ay u tallaabeen muslimiinta caalamka ayey talo fara ka baxday. Dowladda deenishku waxay dareentay markii kowaad intii ka dambeysay dagaalkii labaad khatar adag inay ku jirto siyaasadeeda dibadda. Waxaa sii khaatumeysanaya calaaqadii dhaqaale ee kala dhaxeysay dalalka muslimiinta iyo wax Alla wixii rajo ay ka lahaayeen mustaqbalka dhankaas oo ay ugu horreyso ka qeybqaadashada dib u dhiska Ciraaq oo ay si aad ah ugu hanweynaayeen.
Waxaa intaa kasii daran in aysan dawladda iyo wargeyska toona saadaalin dhab ah ka bixin karin, xilli intee la’eg bey ku qaadan doontaa in ay kagudbaan xaaladda murugsan ee ay ku jiraan. Odoros xumidaas ayaa loo aaneynayaa aqoon xumida iyo khibrad yarida ay u leeyihiin dadka muslimiinta ah iyo dhaqankooda.
In kastoo ilaa iyo hadda aanan wargeyskii aflagaadeeyey nabiga s.c.w. iyo ra’iisulwasaaraha toona aysan bixinin cudurdaar la gareysan karo iyo cambaareyn toona, hadana waxaa muuqata in cunaqabateyntii ganacsiga, mudaaharaadyadii shucuubta muslimiinta ay ka dhigeen meelo kala duwan oo caalamka ah iyo guud ahaan duufaanta carada ee ku kacday inay si toos ah iyo si dadbanba saameysay nolol maalmeedka qof kasta oo deenish ah.
Xaaladda muslimiinta ku dhex nool Denmark ayay warbaahintu uga hadashay si ka ballaaran sidii hore, khaasatan labadii usbuuc ee lasoo dhaafay. Dantu waxay qasabtay in lagu casuumo telefishinnada waaweyn ee dalka dad muslimiin ah oo aanan horaan loogu aqoon inay kasoo muuqdaan shaashooyinka telefishinnada, kuwaas oo aysan warbaahintu jeclaan jirin inay halkaa kasoo muuqdaan.
Muslimiinta ku dhex nool Denmark ayaa markii ugu horreysay muddo sanawaad ah dareemay tixgelin iyo dabacsanaan ay illaaween waa hore. Dhinaca kale marka laga eegana dhanka muslimiinta waxaa ka jirta cabsi weyn oo ay ka qabaan in haddii arrimuhu ay kasoo reyn waayaan inay dhici karto in iyaga looga cad goosto wixii soo gaaray Denmark.
Deenishka dhankooda waxay ka cabsi qabaan in arrintani ay isu beddesho dagaal diineed oo dhex mara muslimiinta iyo reer galbeedka. Codbixin laga qaaday shacabka deenishka usbuucii lasoo dhaafay ayaa sheegtay in 74% shacabku ay saadaalinayaan, kana cabsi qabaan in arrintani ay isu rogto dagaal diineed oo faraha looga gubto, kaasoo u dhexeeya muslimiinta iyo galbeedka.
Gardarro garab og iyo cudur geeri og toona lagama kaco!
Kalmadda ``wadahal´´ ayaa kumannaan jeer lagu soo celceliyey marka la isu geeyo inta jeer ee ay isticmaaleen warbaahinta kala geddisan labadii usbuuc ee lasoo dhaafay.
Waxaa wareysiyo iyo doodo kala geddisan laga dhex furay dadka matala muslimiinta ku dhaqan dalkan iyo kooxaha siyaasadda ee garabka midig ee xag jirka ah oo uu ka tirsan yahay tifaftiraha wargeyskii aflagaadeeyey nabiga s.c.w.
Habeen habeennada kamid ah ayaa dood teleefishinnada laga siidaayey la isaga hor keenay afhayeenka ururka muslimiinta Yurub ku nool u qaabilsan difaaca Rasuulka s.c.w. iyo madaxa tifaftirka JP. iyo qaar kamid ah madaxda ururrada xag jirayaasha. Dooddaas oo uu afhayeenkii muslimiinta Axmed Cakkaari kaga awood roonaaday madaxa tifaftirka wargeyska ayuu tifaftiruhu ka sheegay telefishinka in uu dib uga fikirayo in uu cudurdaarto iy in kale.
Maalmo yar kadib wuxuu tifaftiruhu (Carsten Juste) dalbaday in uu la kulmo muslimiinta kadibna ay soo wada saaraan bayaan ay wadaag ku yihiin. Hase yeeshee wuxuu shardistay saddex arrimood oo kala ah.
1) In uusan ka cudurdaaraneynin sawirradii uu jaraa’idku ku aflagaadeeyey nabiga s.c.w., laakiin uu ka cudurdaaranayo caradii ay muslimiintu kaga jawaabeen sawirrada, taasoo ku timid qalad ay muslimiintu ka fahmeen sawirrada ee aanan aheyn qalad ay galeen isaga iyo wargeyskiisa toona.
2) In Muslimiintu ay aqbalaan dimuqraadiyada Denmark iyo xorriyadda hadalka ayna saxiix ku muujiyaan ogolaanshahoodaas
3) Iyo in uusan muslimiinta wax ballan qaad ah ku siin doonin in aan mar dambe wax looga sheegi doonin wargeyska uu tifaftiraha ka yahay.
Saddexdan Shardi oo aanan xumaan iyo xamaaqo isku dhaamin ayay muslimiintu gaashaanka ku dhufteen. Tallaabadii xigty ee uu qaadayna waxay aheyd in uu soo saaray bayaan uu ugu magac daray ``qaab cusub oo cudurdaarasho ah`` kaasoo nasiib darro qaar kamid ah bogagga Soomaalida iyo muslimiin kaleba lagu daabacay, dadka qaarkiisna is moodsiiyeen in uu cudurdaar sax ah yahay. Waxa ku yiil oo dhami waxay ahaayeen muslimiineey khalad ayaad ka fahanteen wixii aan sameynay waxaanan ka xun nahay in aad qalad fahanteen.
Si kastaba ha ahaatee wargeyska iyo dowladda toona meeshey doonaanba isku halleyn ha ka heystaane, kama go’na inay waqtigan xaaliga ah cudurdaar ka bixiyaan wixii ay geysteen ee dhibaatada xoogga leh u sababay.
Maxaa islaamka ku gooniya, maa diimaha kaleba wax laga sheego?
Tifaftiraha qeybta dhaqanka ee wargeyska JP. Flemming Rose oo ah ninkii sawirradan markoodii koowaad ku baahiyey wargeyska ayaa maalmo ka hor wareysi lagula yeeshay telefishinka CNN. Kadib markuu Flemming ku faantamay sumcadda uga soo hoyatay iyo magaca uu ka dhaxlay sawirradii uu isagu ku soo saaray wargeyska ayaa waxaa la weydiiyey sababta uu diimaha kale sawir gacmeedyo dacaayad ah uga faafin waayey.
Flemming oo ka jawaabaya su’aashaas ayaa yiri sannadkii 2003 ayey nasoo gaareen sawirro noocan oo kale ah oo lagu dacaayadeynayo diinta kirishtaanka. Xilligaas waa aynu diidnay in aan faafinno sawirradaas, hase yeeshee hadda ayaa waxaa ii diyaarsan sawirro lagu dacaayadeynayo kirishtaanka iyo yuhuudaba.Waxaan doonayaa in aan usbuucan soo socda kusoo saaro wargeyska, sawirradaasna waxaan kaa tusi kataa midkan. Wuxuu soo bixiyey sawir muujinaya bambaano qarxi rabta oo ay ku taal xiddigta lix geesoodka ah ee astaanta u ah calanka yuhuudda.
Markii uu dhammeystay wareysigii CNN-ka ayaa waxaa isla meeshii kala soo hadlay madaxa qeybta tifaftirka ee JP. Carsten Juste oo amar ku siiyey in uu raalli gelin ka bixiyo arrinkaas uu ku hadlay. Flemming Rose oo towbad keen ah ayaa raalli gelintii lagu amray halkii kasoo jeediyey isagoo ballan qaaday in aan sawirradaa lagu soo saari doonin wareyskooda. Waxaa intaa noogu xigtay in Flemming Rose shaqadii laga siiyey fasax aanan dhammaad laheyn oo uu kaga maqnaan doono ilaa muddo aan la xaddidin.
Hadaba waxaa is weydiintu tahay haddii diinta yuhuudda iyo kirishtaanka laga raalli geliyay xadgudub aanan wali lagu sameyn laakiin lala maaganaa, maxay islaamka ugu quuri la’yihiin inay ka raalli galiyaan xadgudubka jira ee ay iyaga ku sameeyeen. Haddii ay qiil ka dhiganayaan dimuqraadiyad baan difaaceynaa in aan idiin cudurdaarannana wax kallifaya ma jiraan, waxaannu ogsoon nahay in waddamo Denmark la mid ah, dimuqraadiyaddana kaga fac weyn in ay raalli gelin kadhiibeen sawirradan markii lagu soo bandhigay wargeysyadooda sida Fransiiska, Sweden iyo Norway iyo Finland oo galabta uu ra’iisulwasaarahoodu uu raalli gelin ka bixiyey isla masawirradaas. Mise mareykan baa lagu eedeeyaa in uu isu arko inuu yahay booliiska adduunkee Denmark-yareyna ma waxay rabtaa in ay jugeysato jagada ah inay yihiin waardiyayaasha dimuqraadiyadda?. Maxaase diinta Islaamka loo siin la’ yahay ixtiraamka iyo qadarinta ay mudan tahay ee ay heleen diimaha kale ee dadyowga aanan muslimiinta aheyni heystaan?
Halkaas waxaan si cad uga arki karnaa in xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyaddu ay shaqeeyaan oo kaliya marka reer galbeedku ay doonayaan in ay Islaamnimada meel kaga dhacaan ama u suurad xumeeyaan dadka kale.
Ha lagala noqdo aqoonsiyada
Waxaa iyana waxyaabaha la yaabka leh ee lagu qoslo noqotay in qaar kamid ah muslimiintii jawaabta ka celisay marin habaabinta warbaahinta deenishka, loo qalqaalinayo in lagala noqdo aqoonsiga deenishnimada sida uu ku baaqay xisbiga xag jirka ah ee lagu magacaabo xisbiga bulshada deenishka (Dansk folkeparti). Xisbigaas ayaa ku tala bixiyey in saddex ka mid ah muslimiinta ku nool Denmark lagala noqdo dhalashada dalka. Saddexdaas nin ayaa laba kamid ah waxay ka tirsan yihiin guddiga muslimiinta yurub u qaabilsan difaaca nabiga s.c.w. kuwaasoo kala ah af-hayeenka ururka Axmed Cakkaari iyo madaxa wafdigii qadiyaddan darteed loogu diray Masar Abu Bashaar iyo nin kale oo aanan ku jirin xubinna ka aheyn ururka difaaca nabiga s.c.w. oo lagu magacaabo Muxammad Fu’aad Al-Baraazi, kaasoo muddooyinkii dambeba u ololeynayey in cudurdaar ku sheegga Jyllands-Posten sida uu yahay loo aqbalo si xiisadda taagani usoo afjaranto.
Nin daad qaaday xumbo cuskay
Denmark ayaa tan iyo intii ay xiisaddani kacday idaacadaha kasiideyneysay hadalka cid kasta oo dabeyc u muujisa waxay doonaanba ha ahaadeene. Ra’iisulwasaaruhu wuxuu qeylo dhaan u dirsaday midowga Yurub iyo xulufadooda kale ilaa ay kaalmo ka bideen Ayaan Xirsi oo teeda u meel la’ oo waa hore ka baxday islaamnimada si loo siiyo sharci qaxootinimo.
Ayaan oo tabarta ba’day hiilo ah ayaa shir jaraa’id ku qabatay Holland. Wax cusub lagama sugeyne sidii caadada u aheyd ayaa hadalkeedii nahda darnaa ku muujisay nacaybkeeda Islaamka iyo taageerada ay u heyso ra’iisulwasaaraha Denmark iyadoo waliba ereyo akhlaaq darro ah ku weerartay warbaahinta adduunka qeybahooda ka gaabsaday in ay sii faafiyaan masawirrada Jyllands-Posten, kuna tilmaantay inay yihiin dad fulayo ah.
Waxaasoo aflagaaddo iyo xadgudub ah iyadoo ay jirto ayeynu wali arkeynaa in uu marba marka kambeeya isa soo tarayo xiisaha tiro aan yareyn oo deenishka ah ay u qabaan inay wax ka ogaadaan Islaamka. Usbuucii lasoo dhaafay waxaa maktabadaha iibka ee dalka oo dhan ka dhammaaday kutubtii Qur’aanka aheyd ee ku tarjunneyd afka deenishka, iyadoo lagu war galiyey dadkii tirada badnaa ee is liis gareeyay si ay u helaan nuskho Qur’aanka ah oo tarjuman , inay ugu horreyn dalabkooda heli doonaan laba usbuuc kadib.
Dabkaan kulkiisa ku diirin dambaskiisa lagama leexdo
Gabagabadii wax aad dhib moodeysid oo khayr kuu ah baa jira ayaa la yiri. Marka la isu geeyo raadka ay reebtay arrintan waxaa la dhihi karaa ma xuma amabase ugu yaraan ugama darin muslimiinta. Si kale haddaan u cabirno waxaan dhihi karnaa muslimiintu waxay si camaliyan ah u muujiyeen jaceylka ay u qabaan Rasuulka s.c.w. qof walbana waxa uu arkay dowrka uu ku leeyahay wax ka beddelka iyo wax ku kordhinta waxa agagaarkiisa ka dhacaya har iyo habeen. Waxay muslimiintu si ficil ah u beeniyeen aragtidii wargeyska ee aheyd in culimada oo kaliya ay dhibsanayaan in diinta meel looga dhaco isla mar ahaantaana ay kaligood u taagan yihiin difaacidda diinta iyo muqaddasaadka.
Waxay muslimiintu heleen tixgelin aysan heleen haddaanan la arkeen in ay yihiin dad dulmiga iyo cadaawadda iska caabin kara, hase ahaatee wax badan ayaa wali ka laaban halkii ay ku dhammaan laheyd qadiyatan. Waxaa iga xasuusin ah in falalka qaarkood oo ka dhacay goobaha qaar in muslimiinta looga beegtoonaa marka la eego qadiyadda shariifka ah ee ay difaaceeda isu taageen iyo xilka ka saarnaa inay ilaaliyaan sumcaddooda.
Dhanka Denmark waxaan dhihi karnaa wixi looga digayay baa daaray, waxaase nasiib darro ay qabaan ah inaysan wali garan dhinaca xalku ka jiro, haddey garteenna aysan wali kasoo go’in inay u dhaqaaqaan dhinaciisa ama ay iska indha-tirayaan, su’aashuse waxay tahay yey u daran tahay?. Waxaa maanta Denmark ay dhab ahaan u fahmi karaan, hadal murtiyeedkii ahaa ``adigoo guri dhalo ah deggan, guri reerood dhagax laguma tuuro´´.
Si kastaba arrini ha ahaatee, maadaama aanay cidina saadaal lagu kalsoonaan karo ka bixin karin halka ay gabagabada isugu biyo shuban doonto xiisaddan taagan, arrinku wali waa fari kama qodna faanoole. Halka arrin oo aanan ka shakisaneynse wuxuu yahay in ciribta wanaagsani ay mar walba yeelanayaan mu’miniinta, haddii ay la yimaadaan shuruudihii ay ku mutaysan lahaayeen gargaarka iyo guusha.
Rabbi waxaan weydiisaneynaa in uu naga dhigo kuwo u hiiliya xaqa meel ay joogaanba, naguna sugo qowlka sugan adduun iyo aakhiraba.
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 15, 2006